Lammi Oromoo Biyya Belgium fi Nederland Jirtan hundaaf
Gummin Paarlamaa Oromoo biyya Belgium Maandhefatee biyya ala fi biyya keessati dhimmaa Oromoo hunda irratti hojjecha jiru, Projectota 10 dammee adda adda jalati qopheese irratti hojjeeta jira. Kana keessa dameen Hawassumaa isaa tokko, dameen kun hojii qabatama hojjechuu karoorfatee keessa dursa kan keenameef Dictionary ykn Galmee jechoota Afaan Oromoo-Nederlands, fi Nederlands-Oromoo qoopheesudha, dabalataan jeechoota guyya guyyan nama gargaran gagaababaa, Oromoo afaan Nederlands hin beekneef ykn Tursiti biyya Oromiyaa deemuuf itti dabalamee hojjetamee jira; hojii wagga lama gutuu hojjecha jiru kun jeechoota 100,000-300,000 ta’ee qabatee qulqulina akka ba’uuf karorfanee jira.
Wiirtun Qoorannoon Oromoo fi Gaanfa Afrika keenya ilee degersa barbachisuu ummataa oromoof goochuuf sagantefatee jira, degersi kun degersa malaqa utu hin tanee dandeeti beektoota Oromoo adunya irra jiran gurmesun waan ijoolee Oromoof gargaruu Kitabota fi qoorannoo Amaya biyaa galchudha. Qabxiin keenya ini lamafa amoo Jeechoon Afaan Oromoo hundi guboo Afaan Oromoo (Dictionary) keesaati guramuu qabu ergasi booda amoo softwary keessati galanun Afaan adunya hunda internet keessati jijiruu qabu. Kun hoji yeeron itti keenamu miti GPO Guyyan Caamssa 29, 2011 (29 may, 2011) 9:00 kasse conferenec wayee affan Oromoo Belgium iti dhiyeesuf deemuu irrati Jeechoon Afaan Oromoo hundi Komputera keessa galan softwer keessa galaani Oromoo English, Firance, Arabi, Russia, Germany, Spansh, Suwailli, Norwagiyan, Nedarlands kkf akka jijiraman goochuuf projeect egalee hanga amati itti fufee jira. Hoji Qoorannoo kana kan egalee lafuma kanee utu hin tanee Barbachisumaa Oromoo- English Dictionary erga qooranne booda, Dandeeti namoota qabdan erga qoorane booda qooranno keenya kana irrati yoo ta’ee bu’aa gudaa fidaa jeene yaadneeti. Qooranoon keenya akka mulisuti Oromiyaa keessati Baratoon, Barsisoon, Manen barumsa hanqina Mana kitaba fi hanqina Kitaba fi Gubo Afaan Oromoo ‘dictionary’ akka qaban raggan kun ni mulisa.
Kana malee jeechooni Afaan Oromoo Oromiyya naannoo garagaraa keessatti dubataman hundi akka itti dabalame gaabbatuu gochuuf yaala jira, kanaaf imoo lammin Oromoo hundi yoo irratti hirmate waan gaabataa qoophessuf nama gargara. Kanaafu lamiin Oromo biyyotaa laman kana keessa jirtan hundi waan ijooleen keessan bori itti fayadaman fi kun afaan kooti bori kan jeetan bareedee akka ba’uuf nu gargaruun dirqama lamuumatti, bakka jiruti Oromoof waa hojjene darbun dhaloota dhufuuf gargara waan ta’eef, Oromoon biyya adda adda jiru ilee Enyummaa isaa ijaruu, malatoo fi qunammtii lammi biroon horachuu waan qabuuf.
Damee hawwasumaa kun Oromoo biyyaa dhufuu rakko isaa bakka itti furmata argatuu, essa deemuu akka qabuu, mal goochuun akka isaa irra egamuu fi bakkota inni qunamuu qabuu kan ibsuu (integration program for Oromo nationality) afaan Oromoof afaan Nederlands qoopha’aa jira. Kun ilee yaada keessanin gaabachuu qaba. Walumagalatti Oromoon biyyota laman kana keessa jirru, barumsaa fi muxannoo adda adda qabu, bakka hojji isaatti jeechoota Nederlands Oromoof bayee fayyadan beekuu danda’uu. Akkasumas bakka dhaloota isaatti afaan Oromoo bori ijooleen isaa fi lammii Oromoo kan gargaru waan beekuu qaba jeedhe yaadu qaba. Kanaafu jeechoota Afaan Oromoo dhalootan beekuu ykn afaan Nederlands bakka hojji isaati baratee lamanuu hikka isaa waliin bareefaman yoo nu fidee dhufe Galmee jechoota ykn Dictionary kana keessa akka galee Oromoo gargaru ta’aa. Ykn Email Gummi Paarlamaa Oromoo gpo.info@yahoo.com yoo nu ergitan, ni gamana. Kana dura Dictionary qoopha’ee kana namoota murssaf Print goonee akka gaabsanf ergnee ture, garuu deebi hin arganee, mana ofi abbatu ijaarata afaan keessan gudisuuf boodeeti hin jeedhina.
Guyya gaafa Camssa 29, 2011 ganama kassee Oromoon wal geenyee jeechoota Gubboo kana keessa jiran hunda gartuu adda addatti Hiramee irratti mariin goodhamee gabifamee maxanfamaa. Maxanssa gubboo jeechoota Oromoo kana Hawwasi Oromoo fi lammin Oromoo biyya hunda jiran akka nu gargartan abdii qabna
Guyyan Caamssa 29, 2011(29 may, 2011) 9:00 kasse
Bakki walga’ii: Patriottenstraat 62, 2600 Antwerpen
Qindesitu Wiirtun Qoorannoon Oromoo Adunya fi Gaanfa Afrika
Damee Hawwasumaa Gumi Paarlamaa Oromoo
Patriottenstraat 62, 2600 Antwerpen Belgium,
GSM +32(0) 488 47 93 60 Email: gpo.info@yahoo.com Contact Us: